Malunga nathi -Shenzhen Lithtech Energy Co, Ltd.
RV / Marine / Iinqwelo zeGalufa / i-EV / AGV
I-Shenzhen Lithtech Energy Co., Ltd.kungumsebenzi ophezulu kakhulu, ngokukodwa kwi-R & D kunye nokuthengiswa kweemveliso zebhetri zeLithium. Ngobuchule bobugcisa kunye nolawulo lwezenzululwazi, uLithtech useke iqela leklasi yokuqala leenjineli, abaqulunqi, iR & D yezinto ezintsha, abaphathi bemveliso, ukuqinisekiswa komgangatho kunye nentengiso / inkonzo yabathengi. Ezibandakanyeke ngokupheleleyo kuphando kunye nophuhliso, imveliso kunye neentengiso ezikumgangatho ophezulu webhetri ye-lithium,
Sikwabonelela ngeenkonzo ezipheleleyo zeemveliso zebhetri ezenziwe ngokwezifiso, kubandakanya uyilo lwebhetri, ukukhula, iiseli zokukhetha kunye ne-BMS, itshaja, sisebenza uluhlu olupheleleyo lwesisombululo sebhetri kunye nezixhobo zokumisa zokuthenga kubathengi.Yiyo loo nto abantu abaninzi besazi iLithtech Energy ekhaya nakumazwe aphesheya.
Iimveliso zethu zebhetri yeLithium zisetyenziswa ngokubanzi kugcino lwe-UPS, iinqaba zeTelecom, inkqubo yokugcina amandla elanga, izithuthi zombane, i-AGV, inqwelo yegalufa, isicoci sasesitalatweni, isithuthuthu sombane, ukukhanya kwesitalato elanga kunye nezixhobo zombane njl.
Njengoko sonke sisazi, ibhetri yeLithium yeyona ndawo isetyenziswa kakhulu kwibhetri kushishino lwe-elektroniki. bulula ukukhanya, okusingqongileyo, ubomi bomjikelo omde, ke iya kuba yindawo elungileyo yebhetri ye-lead-acid, iLithtech ibonelela ngento oyifunayo.
Njengenye yeenkampani ezikhula ngokukhawuleza kwindibano yebhetri / yomthengisi weebhetri onamava eTshayina. U-Lithtech mncinci, unamandla kwaye uyile, siza kuqhubeka nokuphuhlisa iimveliso ezinoluvo kunye nobuchwephesha bokuqhekeka kwixa elizayo, Siyakholelwa ukuba singazisa ilizwe liphucukile umgangatho wobomi ngokwazisa itekhnoloji yeLithium yebhetri kuzo zonke izicelo zobomi bethu.
Ubomi obutsha Amandla amatsha amkelekile eLithtech!
Sinento mveliso eqhelekileyo kwaye siqeshe abasebenzi abangaphezulu kwe-100.
Ukuhambisa iimveliso ezintsha kwintengiso ngesantya esikhawulezayo; Ukuphucula ukuthembeka komgangatho wemveliso.
Ukuba kukho imfuneko, sinokunika izatifikethi zerekhodi elektroniki kodwa uxwebhu lwasekhaya kufuneka lugcinwe kwinkampani.
sinabayili abomeleleyo kunye neengcali zokubonelela ngoncedo lobuchwephesha.
Ukunyusa ipakethe yebhetri yemodyuli
Ukufezekisa inqanaba le-MW ESS
Ukuphuhlisa inkqubo yogcino yesikhululo somnxeba se5G
Iwongwe njengeShishini leNight Hight-tech
Kuvunyiwe yi-National "Peacock Plan" Iprojekthi yokudibanisa italente
Ngaphezulu kweeyunithi ezingama-20.000 zeenkqubo zebhetri ye-lithium ebonelelwe kwi-HESS kunye nokuhamba ngesantya esiphantsi kwesithuthi
Iqabane kwifektri yePakethi, iqela lepakethe yobungcali lasekwa
Intsebenziswano eyakhelweyo ngobuchule kunye neNkampani yeZithuthi eziNgqongileyo yeNanning, iDalian Rongke Power, eSIASUN
ILithtech yasekwa, ijolise ekunikezeleni isisombululo sebhetri ye-lithium